Cheap No Ihicha Ugboro abụọ ala extrusion onyinye Fatịlaịza Granulator Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Na-abụghị ihicha Roll Extrusion Onyinye Fatịlaịza Granulator nwere akwa ime mgbanwe na akụrụngwa, nwere ike mepụta site na 2.5mm ruo 20mm granules na granule ike dị mma, nwere ike mepụta ọtụtụ ịta na ụdị (gụnyere fatịlaịza organic, fatịlaịza inorganic, fatịlaịza ndu, fatịlaịza magnet, wdg) njikọ fatịlaịza.
Gịnị bụ Roll Extrusion Compound Fatịlaịza Granulator?
Na Roll Extrusion Onyinye Fatịlaịza Granulator igwe bụ a dryless granulation igwe na a dịtụ elu ihicha-free granulation akụrụngwa. Ọ nwere uru nke teknụzụ dị elu, imewe ezi uche, usoro kọmpat, ihe ọhụụ na ịba uru, ike oriri dị ala. Ọ nwere ike ịkwado ngwa ndị kwekọrọ na ya, na-eme obere akara mmepụta iji nweta ikike ụfọdụ nke na-aga n'ihu, nrụpụta igwe.
Prinkpụrụ Ọrụ nke Roll Extrusion Compound Fatịlaịza Granulator
Roll Extrusion Compound Fatịlaịza Granulator igwe bụ nke extrusion ileghara nlereanya, ọ adopts akọrọ Rolling technology mpikota onu na powdery ihe n'ime ahụ. Akọrọ mpịakọta pịa granulator tumadi na-adabere n'ụzọ nke mpụga nsogbu ịmanye ihe na-aga site na ọdịiche dị n'etiti abụọ dịtụ ịtụgharị rollers iji mpikota onu n'ime ahụ. N'oge a na-emegharị usoro, enwere ike ịgbakwunye ezigbo njupụta oge site na 1.5 ~ 3 iji mezuo ihe ụfọdụ achọrọ. Ngwakọta nke igwe akụrụngwa a dị elu, nke a na-ejikarị eme ihe na fatịlaịza nke fatịlaịza, ọgwụ, ụlọ ọrụ kemịkal, nri, kol, metallurgy na ngwaọrụ ndị ọzọ, ma nwee ike ịpụta ọtụtụ iche, ụdị dị iche iche (gụnyere fatịlaịza organic, fatịlaịza na-edozi ahụ, fatịlaịza ndu, fatịlaịza magnet, wdg.
Ntak emi Họrọ Anyị Extrusion onyinye Fatịlaịza Granulator Machine?
Anyị factory raara nye organic & onyinye fatịlaịza granulation akụrụngwa na ọrụ teknụzụ na ndị ọrụ, gụnyere nhazi usoro izugbe maka mmepụta kwa afọ nke 1-100,000 tọn na-enweghị akọrọ akọrọ, mmepụta nke usoro ntuziaka zuru ezu, inye ọrụ, niile na otu ọrụ.
Ka ọ dị ugbu a, mgbe mmepe nke ọtụtụ afọ nke ahụmịhe n'ichepụta ọtụtụ akụrụngwa fatịlaịza extrusion igwe akụrụngwa, na-anabata ihe dị elu na-egbochi mmebi ahụ na-eguzogide ọgwụ, na-akpachara anya rụpụta, nwere uru nke ọdịdị mara mma, ọrụ dị mfe, obere oriri ike, ogologo ọrụ ndụ, elu ọnụego nke ọka, anụ ụlọ fatịlaịza granule igwe merela agadi, ngwaahịa site na mba, a usoro granulator bụ na ọdabara ka dịgasị iche iche.
Uru nke Extrusion Compound Fatịlaịza Granulator Machine
1. Na-enweghị ihe mgbakwunye ọ bụla, a na-etinye powders akọrọ ozugbo.
2. Ike granular nwere ike idozi site na ịpịgharị nrụgide nke ala, njikwa ike nke ngwaahịa ikpeazụ.
3. Omume okirikiri iji nweta mmepụta na-aga n'ihu.
4. Akụrụngwa bụ ike ịpịkọta ịkpụzi site na nrụgide igwe, na-enweghị ihe mgbakwunye ọ bụla, a na-ekwe nkwa ịdị ọcha ngwaahịa ahụ.
5. Akọrọ ntụ na-granulated ozugbo na-enweghị usoro ihicha usoro, ẹdude mmepụta usoro dị mfe convergence & mgbanwe.
6. Ike dị iche iche dị elu, ma e jiri ya tụnyere usoro ndị ọzọ na-eme ka ọ dị elu, mmụba dị nro dị nro dị mkpa ， ọkachasị maka oge ahụ ebe mmụba nke mkpokọta ngwaahịa.
7. Enwere ike iji ihe dịgasị iche iche mee ihe maka ịkwanye, ike granular nwere ike gbanwee kpamkpam dịka ihe dị iche iche.
8. Kọmpat Ọdịdị, mfe mmezi, mfe ọrụ, obere usoro, ala oriri ike, elu arụmọrụ, ala ọdịda ọnụego.
9. Jikwaa mmetọ gburugburu ebe obibi, belata ihe mkpofu na ntụ ntụ, ma melite ikike ịkwaga ngwaahịa.
10. Isi nnyefe mmiri jiri akwa mma alloy ihe. Igwe anaghị agba nchara, titanium, chromium na ndị ọzọ na elu alloys nke ukwuu mma eyi eguzogide, corrosion eguzogide, elu okpomọkụ na mgbali ike, nke mere na igwe a nwere ogologo ọrụ ndụ.
Nchịkọta nke No Dry Double Roller Extrusion Compound Fatịlaịza Granulation Production Line
YiZheng Arọ Machinery Co., LTD nwere ike inye usoro imewe na-enye dum usoro maka amị compound fatịlaịza.
Nke a Ọ dịghị Ihicha Ugboro abụọ ala extrusion onyinye Fatịlaịza Granulation Production Line nwere ike ịmepụta fatịlaịza fatịlaịza dị elu, nke dị ala na nke dị ala maka ọtụtụ ihe ọkụkụ. Na granulator abụọ iji mepụta granulu, usoro mmepụta anaghị achọ usoro ihicha, inwe obere ego na obere ike oriri. Enwere ike ịmepụta ihe ngosi nke granulator iji mee ụdị na nha dị iche iche. Ahịrị ahụ gụnyere igwe batching akpaka, ndị na-ebu belt, ndị na-ebugharị ihe, ndị na-eri nri, ndị na-ebupụta extrusion, igwe nyocha rotary, ụlọ nkwakọba ngwaahịa gwụchara, na igwe na-akpaghị aka. Anyị dị njikere ịnye akụrụngwa fatịlaịza ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ngwọta kacha mma maka ndị ahịa anyị a ma ama.
Ọ dịghị Ihicha Ugboro abụọ ala extrusion onyinye Fatịlaịza Granulation Production Line Usoro Flow ：
Ngwa ihe batching (Static batching igwe) → inggwakọta (Disc igwekota) ran Granulating (Extrusion granulator) ing Screening (Rotary drum screening machine) ating mkpuchi (rotary drum mkpuchi igwe) ished Emechara ngwaahịa mbukota (akpaka quant packative packager) rage Nchekwa (ịchekwa na a jụụ na akọrọ ebe)
Rịba ama: Usoro mmepụta a bụ maka amaokwu gị naanị.
Roll Extrusion Onyinye Fatịlaịza Granulator Video Display
Roll Extrusion Onyinye Fatịlaịza Granulator Model Nhọrọ
Urughuru dayameta (mm)
6-20N (Ndinuak ike)
Nke gara aga: Onwe-propelled Composting Turner Machine
Osote: Typedị Ọhụrụ Organic Fatịlaịza Granulator
Chain efere Compost agbanye
Okwu Mmalite Gịnị bụ Chain efere Composting Turner Machine? The Chain efere Composting Turner Machine nwere ezi uche imewe, obere ike oriri nke moto, ezigbo ike ihu gia reducer maka nnyefe, ala mkpọtụ na elu arụmọrụ. Akụkụ dị ka: Chain na-eji ogo dị elu ma na-adịgide adịgide. A na-eji usoro hydraulic eme ihe maka ibuli ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Mgbakwunye Sieving Solid-liquid Separator? Ọ bụ ngwa ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi maka nsị nsị anụ nri ọkụkọ. Ọ nwere ike ikewapụ nsị na nsị nsị anụ na mkpofu anụ ụlọ n'ime fatịlaịza organic na fatịlaịza organic siri ike. Enwere ike iji fatịlaịza organic fatịlaịza maka akuku ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Straw & Wood Crusher? The ahịhịa & Wood Crusher na ndabere nke na-adọrọ uru nke ọtụtụ ndị ọzọ iche iche nke crusher na-agbakwunye ọhụrụ ọrụ nke ịcha diski, ọ na-eme ka ojiji nke ndinuak ụkpụrụ na ikpokọta ndinuak teknụzụ na kụrụ, ịkpụ, nkukota na ikwo ihe. ...